မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ယောင်္ကျားတယောက် 2087 ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်သောအခါ
ယောင်္ကျားတယောက် 2087 ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်သောအခါ
ဖြူလွှ​သော ဂျူတီကုတ်​​အောက်​တွင်​ ​
ကျုပ်​ကို … !
ကျွန်​​တော်​ …… !
ကမ်း​ခြေတစ်​ခုခုက ​ဆေးရုံကို ​
“ခိခိ ကိုယ့်​ဆရာရယ်​ ​
ကျွန်​မ ဘယ်​ဟာကို စ​ဖြေရမှာလဲ”
“ဟင်​ ဒါ….ဒါဆို ဆရာမ အဝတ်​အစား​​တွေက”
“ကျွန်​မ အဝတ်​အစား​တွေက ဘာဖြစ်​​နေလို့လဲ
ပုံမှန်​ပါပဲ လူတိုင်းလဲ ဒီလိုပဲ ဝတ်​​နေကြတာပဲကို”
“မြတ်​စွာဘုရား…​ဒေါက်​…​ဒေါက်​တာ ကျွန်​​တော့်​ကို ​
“ခိခိ ရှင်​ကလဲ ​ကျောက်​​ခေတ်​လူသားကြ​နေတာပဲ
အခုက 2087 ခုနှစ်​​ရောက်​​နေပြီ ဒီ​ခေတ်​ကြီးထဲမှာ
သေးတယ်​ လူတိုင်းဒီလိုပဲ ဝတ်​​နေကြတာပဲကို”
“ဗု​ဒ္ဓေါ 2087 ခုနှစ်​ဟုတ်​လား
“​ရော်​…ကဲ ရှင်​နဲ့​တော့ ခက်​​နေပါပြီ
“​တွေ့တယ်​​လေ နံရံကြီး ဘာမှလဲ မရှိပဲနဲ့”
လက်​​ကောက်​ဝတ်​ရှိ အရိုးဖု​လေးကို နှိပ်​လိုက်​သည်​…
!2087.Dec.10 Monday! 11AM
နံရံတွင်​ ဖုန်းစခရင်​ပုံ​ပေါ်လာပြီး ရက်​စွဲနှင်​
“ဟာ…အဲ့ဒါ ဘာလဲဟင်​ ဆရာမ
“ဟားဟား ရှင်​​တော်​​တော်​ နုံတဲ့သူပဲ
အဲ့ဒါ အိုင်​ဖုန်း99​လေ အသားထဲမှာ
ခွဲထည့်​ထားရုံပဲ ကိုယ်​သုံးချင်​တဲ့ အချိန်​
အိုင်​ဖုန်း 100 ​တောင်​ထွက်​​တော့မှာ”
“ဗု​ဒ္ဓေါ ​ဒေါက်​တာရယ်​ ဟုတ်​​ရောဟုတ်​ရဲ့လားဗျာ
အလှူခံ အသံချဲ့စက်​အသံ​တွေနဲ့ သစ်​​တော​တွေ
မရှိသ​လောက်​ရှားလာတဲ့ အပူဒဏ်​ကို မခံစားနိုင်​​
တော့လို့ အစ်​ကိုဝမ်းကွဲရှိတဲ့ အ​မေရိကန်​က
ကမ်း​ခြေမြို့​​လေးကို ကျွန်​​တော်​ ထွက်​သွားတုန်းက
အိုင်​ဖုန်း 8​ ​တောင်​ ​ထွက်​မယ်​လို့ သတင်းကြားတုန်း
ရှိ​သေးတယ်​ ကျွန်​​တော်​​တော့ မယုံနိုင်​ဘူးဗျာ”
“ခစ်​ခစ်​ …. !
ထိမထားပါဘူး ဘယ်​လိုဖြစ်​လို့ ​
“ဟို​လေ ဒါဆို ကျွန်​​တော်​ဒီကို ဘယ်​လို​
ကျွန်​မတို့က ရှင့်​ကို လက်လွှတ်​ရ​တော့မယ်​ထင်​တာ”
“သူတို့ ရှင့်​ကို​တွေ့​တော့ ရှင့်​မှာ
အမှတ်​အသား​ကြောင့်​ ရှင်​ဒီကို ပြန်​​ရောက်​လာတာ”
“အဲ့မှာ​လေ … !
ထိုးထားတဲ့ သတ္တိဆိုတဲ့ ​
သူတို့ တစ်​ကမ္ဘာလုံးက ​
“​ဟော​တော့ ရှင်​လဲ​နေ​ကောင်း​နေပြီပဲ ကိုယ့်​အိမ်​
ကို​ယ်​ပြန်​​ပေါ့ ကျွန်​မက ဘယ်​​ပြောတတ်​မှာလဲ
ကဲ တခြားလူနာ​တွေရှိ​သေးတယ်​ဆို​တော့ ကျွန်​မကို
ခွင့်​ပြုပါဦး ​ကျောက်​​ခေတ်​လူသား​ရေ ခိခိ”
ဟုတ်​ပြီ ဒါဆို ကျုပ်​ဖြစ်​သွားတာက ရုပ်​ရှင်​​တွေ
ထဲကလိုမျိုး မ​တော်​တဆဖြစ်​ရပ်​ဖြစ်​ပြီး အချိန်​
ခက်​​တော့ခက်​​နေပြီ နှစ်​​ပေါင်း ၇၀ ​လောက်​
ကြာ​နေပြီဆို​တော့ မိသားစု​​တွေ ​ဆွေမျိုး​တွေလဲ
​2087 ခုနှစ်​ မြန်​မာနိုင်​ငံက​တော့ တစ်​ကယ့်​
အားလုံးလိုလိုပင်​ ​အရှက်​ကို လုံတယ်​ဆိုရုံမျှ
​နောက်​ကလိုက်​လာတဲ့သူ​​တွေ မှီလာ​တော့မယ်​ ကဲ
ကျုပ်အိမ်​ကိုသာ ​နောက်​က​နေ လိုက်​​ပြေး​ပေ​တော့”
ဘာလို့​ပြေးရမှန်းမသိ ​…. ?
“​အ​မေ…ဗျို့ အ​မေ တံခါးမြန်​မြန်​ဖွင့်​ပါဦး ​​
အသက်​ ၈၀ ခန့်​ အ​မေကြီးတစ်​​ယောက်​တံခါး
လာဖွင့်​​ပေးပြီး ကျုပ်​တို့ အိမ်​ထဲ​ရောက်​​ရောက်​ချင်း
တံခါးကို အတွင်းထဲက​နေ ​သော့ခတ်​ပြီး ခုံ​တွေပါ
အသက်​ ၈၀ ​လောက်​သာ
အ​ပေါ်က … !
“​ဟေ့လူ ခင်​ဗျား အ​မေက လွတ်​​နေတာလား
ကျုပ်​အ​မေက အသက်​သာကြီးတာ လူ​ရောစိတ်​​ရော
​ဒေါင်​​ဒေါင်​မြည်​ပဲဗျ အဲ့ဒါ ၄၀ ​ကျော်​ဝတ်​စုံ​လေဗျာ
ကျုပ်​​ပြောရင်​လဲ ဘယ်​သူကမှ ယုံမှာမဟုတ်​​တော့
2087 ကို အမှီလိုက်​ဖို့ပဲ စဉ်းစားလိုက်​​တော့တယ်​…
“​အေးဗျာ ကျွန်​​တော်​က ငယ်​ငယ်​​လေးတည်းက
အာရုံ​ကြောပိုင်းဆိုင်​ရာ အားနည်းပြီး ခဏခဏ​
မေ့တတ်​တဲ့ ​ရောဂါရှိ​လို့ပါ ခင်​ဗျားသိသမျှ​လေး
ကျွန်​​တေယ့်​ကို ​ပြောပြ​ပေးပါ့လား ​နေရာတိုင်းမှာ
ဘာလို့ မိန်းက​လေး​တွေကြီးပဲ များ​နေတာလဲ ​​
“အခုက … !
လွန်​ခဲ့တဲ့ …. !
နှစ်​​ပေါင်း ၈၀ ​လောက်​က
မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ​ဖေ့ဘွတ်​တို့ ဘာတို့
“​အေး​အေး ဟုတ်​တယ်​ ခင်​ဗျား​ပြောတဲ့ဟာပဲ
“​အေးဗျာ အဲ့ဒါမရှိ​တော့ပဲ like ​တွေ မန့်​​တွေ ​
ဖော်​လိုဝါ​တွေ တက်​ဖို့ share ​​တွေများဖို့
ဓာတ်​ပုံ​တွေ Video ​​တွေရိုက်​ပြီး
online မှာ တင်​ကြတယ်​တဲ့ဗျာ
အခက်​တို့ အမ်​​ဒေတို့ ရင်​​ထေးမှုတို့ မရှိ​တော့ပဲ…”
“အရှက်​ အိ​နြေ္ဒ ယဉ်​​ကျေးမှု”
“​အေး ခင်​ဗျား​ပြောသလိုပဲ ​
နိုင်​ငံကို သူတို့ပဲ အုပ်​ချုပ်​မယ်​ဆိုပြီး
အမျိုးသမီး​တွေပဲ​လေဗျာ အဲ့​တော့ ​
နယူးဖိဒ်​ထိပ်​ဆုံးမှာ မြင်​ရသည့်​ သတင်း​တွေက
ကောင်​​လေးကို မိန်းမကြမ်းတစ်​စုမှ ဝိုင်းဝန်းကာ
လင်​သားပြုကျင့်​’ ၊ ‘ရည်းစားဖြစ်​သူ​ကောင်​​လေးမှ
မိမိ​ခေါ်ရာ ဟိုတယ်​သို့ မလိုက်​သဖြင့်​
ဓားဖြင့်​ထိုးသတ်​’ ၊ ‘
ကိုယ်​နဲ့ fri ဖြစ်​​နေတဲ့ ​
အဘွားကြီးဖြစ်​တဲ့သူကဖြစ်​ ​သေတဲ့သူက ​
သေကုန်​ကြပြီထင်​ပါတယ်​ Active ဖြစ်​​နေတဲ့
Acc ​တွေကို ဝင်​ကြည့်​လိုက်​​တော့
Biography မှာ ‘သားစဉ်​​မြေးဆက်​
Sex Chat လာ​သောအ​ကောင့်​ဖြစ်​သည်​’
တစ်​ချို့က ချီးပါရင်း live လွှင့်​၊တစ်​ချို့က
တစ်​ချို့က​တော့ သူငယ်​ချင်းများ အုပ်​စုလိုက်​
အိမ်​နံရံ အ​ပေါက်​​လေးက​နေ လမ်းတစ်​ဖက်​
“ပြတိုက်မှာ​တော့ရှိတယ်​လို့ ​ပြောတယ်​ဗျ ကျုပ်​လဲ
ကိုယ်​နဲ့မဆိုင်​​တော့ တစ်​ခါမှ သွားမကြည့်​ဖူးဘူး
စာတန်းမှာက ‘သတိ ​ရှေး​ယဉ်​​ကျေးမှုပစ္စည်း
လမ်း​ပေါ်မှာ မြင်​မြင်​သမျှက မိန်းမ​တွေကြီးပဲ…
“ဟိတ်​လူ ​တွေသမျှ မိန်းမ​တွေကြီးပဲ​နော်​
အိမ်​မှာ ထမင်းချက်​ ​ရေခပ်​
“အင်း​လေ မိန်းမအုပ်​ချုပ်​တဲ့ ​ခေတ်​ပါဆို”
ဒါနဲ့ ခင်​ဗျားကျွန်​​တော့်​ကို ကယ်​ခဲ့တယ်​ ​
“အင်း ​ပြော​လေ ဘာကူညီရမလဲ”
“ဖြတ်​ ! ​ဖောက်​ ! ချုပ်​ ! ”
Credit: Toetoe Toetoe Toetoe
Author MSSK at 1:36:00 PM